Dumarka maxay uga mushaar yar yihiin ragga kubadda ciyaara? - BBC News Somali
Dumarka maxay uga mushaar yar yihiin ragga kubadda ciyaara?
Image caption Ciyaartooyda haweenka ee Mareykanka ayaa qaaday koobkii haweenka ee adduunka sannadkii 2015-kii
Ciyaaraha kubadda cagta ee haweenka ah ayaa ku baahaya dunida, iyadoo la filayo in tageerayaasha kubadda haweenka ay guud ahaan gaari doonaan hal bilyan.
Balse waxaa sare u kacaya su'aalaha la xiriirta inta uu gaarayo mushaarka ciyaartoyda haweenka ay qaataan iyo abaal marinada la guddoonsiiyo marka loo barbardhigo dhiggooda ragga ee ciyaara kubadda cagta.
Hope Solo oo ka mid ah xulka qaranka Mareykanka ee ku guuleystay Koob Adduunka waxay sheegtay in farqiga u dhexeeya abaal marinta iyo mushaaraadka ciyaartoyda ragga iyo haweenka ay muujineyso sida xiriirka kubadda cagta adduunka uu uga xaglinayo dhanka ragga.
Wadar ahaan, xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa u qondeeyay dhammaan xulalka ka qeybgalaya koobka haweenka adduunka, lacag gaareysa $30m oo doolar, si loogu abaal mariyo kooxaha.
Sannadkii lasoo dhaafay, ciyaarihii koobka adduunka ee haweenka waxay FIFA ku abaalmarisay kooxahii ka qeybgalayay tartankaas lacag gaareysay $400m oo doolar.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ayaa lacagaha abaal marinta guddoonsiiya xulalka, waxaa marka dambe go'aan ku aadan abaal marinta ciyaartoyda gaara xulalka iyo maareynta lacagta la siiyay.
Image caption Gabadh u dheesha xulka Mareykanka waxay sheegtay in muddo aysan haweenka kubadda cagta helin wax daryeel ah
Sida laga soo xigtay ururrada ay ku mideysan yihiin ciyaartoyda dunida ee Fifpro, haweenka kubadda ciyaara ee ka dheela galbeedka Yurub, waxay mushaar ahaan u qaataan bil kasta €1,000-2,000 oo Euro, halka maalinkii ay gunno ahaan u qaataan €50 ill €100 oo Euro ah, marka ay u ciyaarayaan xulkooda qaranka.
Halka, ciyaartoyda kasoo jeedo dalalka saboolka ah ee dunida ay mushaar yar qaataan marka ay matalayaan xulalkooda qaranka.
Saddexda sano ee soo socota, xiriirka kubadda cagta ee adduunka waxaa uu qorsheynayaa in uu ku maalgeliyo ciyaaraha haweenka, lacag gaareysa ilaa $500m oo doolar.
Image caption Fran Kirby , waxay u dheesha xulka qaranka ee Ingiriiska